Faafaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa 50 ruux oo ku dhimatay... | Universal Somali TV
Faafaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa 50 ruux oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Kenya
Waaxda qaran ee ilaalada wadooyinka kenya ee loo yaqaan NTSA ayaa shaaca ka qaaday in darawalkii waday Bus-kii ay ku dhinteen 50 ruux uu aroorniadii hore ee saaka oo arbaco ah uu ahaa darawal aan wadan shatiga wadida gawaarida xiliyada habeenkii.
Shilkaan oo ka dhacay isaamul goboleedka Kericho ee gobolka rift vallay ayaa waxaa ku dhaawacyo daran ka soo gaaray rakaab kale oo saarnaa gaariga iyadoo guud ahaan socotada ay ahaayeen 67 ruux.
Bus-kaan ayaa darawalka waday waxaa uu lumiyay xakameynta,waxaana uu ka dhacay wadada qarkeeda isagoo ku dul dhacay 20 mitir meel dhulka u Jirta.
Agaasimaha waaxda Ilaalada wadooyinka ee (NTSA) oo shir Jaraa,id qabtay ayaa sheegay in Bus-ka rogmaday ay laheyd shirkada Home Boyz,iyadoo shirkadan aysan u diiwaan gashaneyn in ay shaqeyso xiliyada habeenkii.
Isaga oo la hadlay Tv-ga maxaliga ah ee dalka kenya ee NTV ayaa waxaa uu tilmaamay in milkiilayaasha iska leh Bus-kaan ay qaadi doonaan mas,uuliyada dadka geeriyooday.
Shilkaan oo dhacay abaara 4.30am ee aroorniadii hore ee saaka ayaa waxaa uu noqonayaa shilalkii ugu darnaa ee ka dhaca gudaha kenya bilihii la soo dhaafay.
Wadada uu ku rogmaday buskaan oo si caalami ah loo dhisay sanadkii 2015-kii ayaa waxaa baaxadeeda la weyneeyay,iyadoo ujeedada laga lahaa ay aheyd in lagu yareeyo shilalka.
Gaadiidka isaga kala goosha ismaamulada Kericho iyo kisumu ayaa sidoo kale isticmaala wadadan.
Madaxweynaha dalka kenya Uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa labaduba si wadajir ah uga tacsiyeeyay geerida ku timid asxaabta iyo qoysaska ay waxyeelada ka soo gaartay shilkaan.
Kan-xigaKenya oo ku raadjoogta dagaal yahano ...
Kan-horeSideed kun oo bukaan oo u dhashay yem...
Shirka Golaha Wasiirada Galmudug oo ka qabsoomay Balanbale (SAWIRRO)
Golaha Wasiirada oo ogolaaday in dib loo fasaxo duulimaadyada dalka
Madaxweyne Qoorqoor oo gaaray Degmada Balanbale (SAWIRRO)
Hachalu Hundessa oo lagu aasay Galbeedka Magaalada Addis Ababa (SAWIRRO)
Madaxweyne Muuse Biixi oo shir guddoomiyay shirka Golaha Wasiirada
Wafdiga Madaxweyne Qoorqoor oo booqasho ku joogga Xeraale (SAWIRRO)
53,969,376 unique visits